Achọsiwo onye a na-achọghị - akụkụ 2 | Apg29
Achọsiwo onye a na-achọghị - akụkụ 2
Baptist Baptist nke mbu Baptist 150.
Mgbe ị hụrụ Christer Åberg ka ọ na-eme ihe taa, dịka ọmụmaatụ ya na saịtị blọgụ ya www.apg29.nu, ọgụgụ isi ya na nkọ nkọ nke mmụọ - ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịghọta ịghọta na ya, tupu ahụmịhe nke nzọpụta ya, bụ nke ejiri miri emi jụ.
Site na Baptist Pentikọstal leta 150
Ebe nke abụọ Ama leta na ruturu si Christer Åberg akwụkwọ "A na-achọghị", isiokwu bụ Christer baptism na mmiri na baptism na Mmụọ Nsọ. Isi nke mbụ nke akwụkwọ ahụ ka akpọrọ “Ọchịchịrị ahụ” wee bido dị ka nke a (peeji nke 11): “Ọ dịtụbeghị mgbe m nwere mmetụta na a hụrụ m n’anya, dị mkpa ma ọ bụ dị m mkpa. Ya mere, ahụghị m ụzọ ọ bụla ma ọ bụghị ịkwụsị ndụ m n'etiti ndụ ndị mmadụ achọghị, afọ 17.5. "
N'azụ echiche ndị gbara ọchịchịrị, dina n'etiti ihe ndị ọzọ na -elekota nlekọta na ọtụtụ ndị na-emegbu Na peeji nke 85 nke akwụkwọ ahụ, Christer dere, sị: “N’ezie, abụ m nwa obi ụtọ nke na-eme ihe ọchị. Nne nke nkuchi gwaram mgbe m toro, tupu oria buru ya isi, na m duru ndi mmadu niile chịa mgbe mbụ m biakutere ha na mba. Ma n'ihi ume na nkụda mmụọ niile m ga-ahụ n'ụlọ, n'ụlọ akwụkwọ na oge m, anaghị m aghọ nwatakịrị obi ụtọ. Obi erughị m ala pụtara ìhè nke ọma n'aka m. ”
Mgbe ị hụrụ Christer Åberg ka ọ na-eme ihe taa, dịka ọmụmaatụ ya na saịtị blọgụ ya www.apg29.nu, ọgụgụ isi ya na nkọ nkọ nke mmụọ - ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịghọta ịghọta na ya, tupu ahụmịhe nke nzọpụta ya, bụ nke ejiri miri emi jụ. Ọzụzụ nke karate ya na ọzụzụ ndị ọzọ, nyeere ya aka ruo n'ókè niile na mmechuihu niile.
Baptizim na mmiri na mmụọ
Ma ugbua iga niru nke uzo nzoputa, ya bu, ime baptism na miri na baptism na Mo Nso. Ntughari site na peeji nke 142-145:
“Agụrụ m na Bible banyere baptizim. Achọpụtara m na ọ dị m mkpa ime baptism n’ime Kraịst n’aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mụọ Nsọ. Amaghị m ọtụtụ ihe banyere ya, mana enwere ihe dị n'ime m nke kwuru, sị: "Achọrọ m ka m mee baptizim!" echiche nke. Ma aghọtaghị m na ugbu a ekwere m na Jizọs, ya mere ekwesịrị m baptizim. M nnọọ ụjọ na Sunday n'abalị Ljungby Pentikọstal ụka mgbe m na-ana baptism. Ọ bụ n’ọnwa Jenụwarị, ọnwa ole na ole a zọpụtara m. Ebe a na-adọba ụgbọala n'èzí jupụtara n'ọtụtụ ụgbọala na n'ime ụka ahụ jupụtara na mmadụ. Nzukọ ụka ahụ dum juputara na ebe a na-ekwu okwu. Ekedi ami ye ekpri eyeneren isua 10 emi anade baptism.
Anyị yi uwe ọcha nke gosipụtara na anyị adịla ọcha ugbu a n'ime Kraịst Jizọs. Ikwesighi iyi akwa ọcha. Ọ na-aga nke ọma na uwe ndị nkịtị, mana nke ahụ bụ ihe ha na-emebu na chọọchị ahụ. E mere anyị baptizim n’otu obere ọdọ mmiri zoro ezo n’okpuru ala n’ebe ihe nkiri ahụ dị n’ihu ụlọ nzukọ chọọchị ahụ. Ha ewepụla ihe mkpuchi ala ma jupụta na ọdọ mmiri na mmiri a na-akpọ baptism baptism. Ọ na-egosi na mmadụ na-eli ndụ ochie nke Kraịst na-ebilite n'ime Kraịst na nke ọhụrụ.
Nwa ya nwoke bụ onye nna ya mbụ mere baptizim, onye ụkọchukwu ndị ntorobịa. Mgbe ahụ, agbadara m na mmiri ahụ na obere steepụ. Johnny ama ada ke mmọn̄ oro adara mi. Tupu e mee m baptizim, ahụrụ m na mmadụ niile na-ele m anya. Anọ m na-eche ihe mere ha jiri lelee ya anya, mana m ghọtara na ihe na-eme ugbu a bụ nnukwu ọrụ ebube na ịtụnanya, dịka ọ na-adị mgbe ọ bụla mmadụ kpebiri ịgbaso Jizọs ma mee ya baptizim n'aha ya. Onye ntorobia bu pastor gwara m n'olu dara ụda ka mmadu nile wee nu: `` Site na iwu Nna m ukwu na nkwuputa nke gi, a na m eme unu baptizim n'ime Kraist n'aha nke Nna na nke Okpara na nke Muo Nso! kpuchiri ihu ya wee mechie m ọzọ ka mmiri niile na-asọba na iyi ndị agbasasịrị. Ma ugbu a, emere m baptizim n'ụzọ Akwụkwọ Nsọ nke Agba Ọhụrụ na-akụzi ma na-agwa banyere…
N’otu nzukọ (mgbe e mesịrị, ndetu m), anụrụ m ka otu agadi nwanyị na-asụ asụsụ ọzọ. Ọ nọ ọdụ na azụ ụlọ ahụ ka m wee hụ onye ọ bụ… Ya mere amaghị m taa onye kpere ekpere n'asụsụ dị iche. Aghọtaghị m ihe kpatara na ọ naghị ekpe ekpere n'asụsụ Swedish. Ọ dị ka Finnish, yabụ m chere na o si na Finland. Emechaa, m ga-aghọta na ọ taa ire ya. Akwụkwọ Nsọ na-akụzi na mgbe mmadụ chegharịrị ma mee ya baptizim, mmadụ kwesịrị ịnata Mmụọ Nsọ dị ka onyinye. Nke ahụ bụ mgbe ị nwere ike ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche. Speakingsụ asụsụ bụ asụsụ ekpere nye Chineke. Nata Mmụọ Nsọ dị ka onyinye a na-akpọkwa Baptizim Mmụọ. Ma ugbu a, m chọrọ baptizim na Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche. Ma amaghi m otu o ga esi aga… Mgbe ahu azutara m akwukwo a na akpo ´Obu ndu ohuru nke mmuo´ nke m huru na ulo ahia akwukwo nke ndi Pentikostal n’onu uzo.
O dere n’akwụkwọ ahụ na e nyere Mmụọ Nsọ. Jizọs zitere Mmụọ Nsọ n'ụbọchị Pentikọst, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2,000 gara aga. Ugbu a ọ bụ naanị ịnabata ya n'okwukwe n'ihi na ọ bụ onyinye. A na-anata onyinye mgbe niile, ma ọ bụghị ya, ị gaghị anata onyinye ahụ. O dere na mbụ ị nata Mmụọ Nsọ wee mepee ọnụ gị wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche. Ekpebiri m ịnwale ya. N’ụlọ n’ụlọ m, ana m egbu ikpere n’akụkụ ihe ndina m, dịka m na-eme mgbe ọbụla m n’ekpere n’oge ahụ. Ya mere, m natara Mmụọ Nsọ n'okwukwe, kelee Chineke, saghee ọnụ m wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche. Ọ rụpụtara! Site n'oge ahụ gaa n'ihu, e mere m baptizim na Mmụọ Nsọ ma nwee ike ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche. Ugbu a, ejirila m nwayọọ nwayọọ malite ije okwukwe na iso Jizọs Kraịst. ”
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 13:38